Ku soo dhawow noocyada dabocase ugu wanaagsan
Editor Ee Doorashada November 21,2019
Ugu Weyn Ee Primula
Liiska qaybaha iyo noocyo of primroses
Noocyada kala duwan ee cayayaanka xayawaanka waxay saameyn ku yeelan karaan tirada labada nooc iyo noocyada kala duwan ee ubaxa. Cudurkaan waxaa ka mid ah 550 nooc, iyo shaqada saynisyahanka ee taranta noocyada cusub ma joojineyso. Si loo soo celiyo amarka ee this badan, waxaa lagama maarmaan ah in ay u qaybiyaan noocyo caan ka ah qaybaha. Mid kasta oo ka mid ah ayaa isku daraa noocyo la mid ah qaababka qaarkood.
Tobanka caleemood ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay sariirta dalka oo leh sharaxaad iyo sawir
Waa maxay dacha aan lahayn ubax! Ubaxyada ubaxa ee ubaxa waxay noqdeen qurux aan loo baahneyn, gaar ahaan kuwa noocyada ah ee u baahan dadaalka ugu yar ee ay ku koraan isla markaana waqti isku mid ah waxay leeyihiin muuqaal muuqaal ah oo cajiib ah. Sariir saafi ah oo ubax guga ah ayaa laga abuuri karaa dhirta labada nooc oo leh noocyo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee inflorescences, waxaana lagu dari karaa ubaxyo noocyo kala duwan ah si ay ula jaan-qaadaan midba midka kale ee dhererka, faafidda iyo midabka.
Noocyada dhalmada ee fuchsia guriga: tilmaamo faahfaahsan ee sii kordhaya caleen
Sida loo koro likaha iyo boqoshaada lohodka ee aqalka dhirta lagu koriyo ee sannadka oo idil: tignoolajiyada muuqaalka
Barandhada macaan ee beerta: shucuurada waxyaallaha sii kordhaya ee gobollada kala duwan ee Russia
Sida loo xiro qajaarka ee lagu koriyo oo laga sameeyey polycarbonate: hababka, qalabka iyo sawirrada
Waxa la sameeyo haddii yaanyada lakabku baxo
Vriesia ubax waa quruxda ugu fiican ee guri kasta, tan iyo markii dhulkii warshaduhu waa kaymaha Maraykanka, kiisaska ugu wanaagsan ee koritaanka iyo horumarinta waxay u baahan yihiin xaalado ku haboon, kuwaas oo lagu sharraxay qodobkan. Waxaad baran doontaa sida loo abuuro microclimate lagama maarmaanka u ah xayawaankaaga, kuwaas oo ku farxi doona dadaalka iyo ku farxi doonaan ubaxyo qurxoon. Read More
MTZ-892: sifooyinka farsamada iyo awoodaha tareenka
Sidee looga hortago oo wax uga qabtaa abaarta dambe ee baradho
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Primula 2019